» Journey-Assist - Konke okudingayo ukuhamba
Uhambo - Siza
Isikhathi esihle ngaso sonke isikhathi soHambo Oluhle
Umhlaba / Izifunda
Siyakwamukela ku-portal yethu yokuhamba Journey-assist!
Umsebenzi wethu ukukusiza ekuhleleni ezizimele ukuhamba! Noma kungumsebenzi noma uhambo lokufundisa, izinkambo thematic, izinkambo zokuthenga, izinkambo zezithombe noma uhambo nje ngenhloso yokuphumula. Lapha uzothola lonke ulwazi oludingayo ukwenza lokhu. Ukuqala kusuka ku- amabalazwe asebenzisanayo anokuheha futhi kugcine ngezeluleko nokubuyekezwa kwabavakashi abanolwazi, ngemibiko yezithombe namavidiyo.
Futhi kungosi ungathola inani elibalulekile lemininingwane ewusizo mayelana namazwe amaningi, okukhangayo nezinye izinto ezithakazelisayo kuzo.
Ngokuxhumana ngokukhethekile, ingosi inikeza ithuba shicilela izindatshana zakho, yabelana ngamathiphu akho kanye nama-hacks wokuphila, shiya impendulo yakho nezindaba zokuhamba.
Imininingwane yokuhlela uhambo oluzimele
Izindawo zokuhamba ezidume kakhulu
Индонезия (Bali Java)
Imibhalo eshicilelwe lapha ibhalisiwe izivakashi ku-portal yethu. Vele, i-athikili yakho noma ukubuyekezwa nakho kungavela lapha. Izindatshana ezibandakanya amathiphu awusizo, izincomo, izincazelo zezindawo ezithokozisayo, ukubuyekezwa nezinto ezinjalo. Vele, ngaphambi kokushicilelwa, wonke ama-athikili abhekelwe ukubaluleka kokuqukethwe 🙂
Ukuze wakhe ukushicilelwa kwakho, iya ku-akhawunti yakho siqu, noma mane uchofoze LAPHA 🙂
Индия Мальдивы Philippines
Индонезия China I-Sri Lanka
Камбоджа Ibhayisikobho yezimanga Japan
Yonke imibhalo mayelana namazwe ase-Asia
Izindawo ezi-7 ezinhle zaseTurkey
Izifunda eziyi-7 ezinhle kakhulu zaseTurkey Uhlu Lokuphakathi Amaphesenti angama-97 omhlaba omkhulu waseTurkey use-Asia, namaphesenti amathathu endawo yawo asenhlonhlweni yaseBalkan eSoutheast Europe, ahlukaniswe nezwe lonke yiBosphorus, uLwandle iMarmara kanye neDardanelles. I-Turkey inqunywe yizilwandle i-Aegean, Black and Mediterranean futhi inogu oluhle olude. Abaningi ...
10 amabhishi amahle eTurkey
Amabhishi ayishumi aphezulu eTurkey Uhlu Lokuphakathi ITurkey iyi-patchwork yasendulo yamasiko, abantu kanye namathafa. Njengoba iMpumalanga Yurophu ngakolunye uhlangothi ne-Asia ngakolunye uhlangothi, iTurkey ibumbe umlando wayo omude ngaphansi kwethonya lemibuso, izibopho zamasiko nemizila yezohwebo edlula kuyo. Ukubukeka kwayo kwemvelo nolwandle ...
Izindawo ezili-10 ezihamba phambili ze-Istanbul igalikuni
Izindawo ezili-10 ezihamba phambili ze-Istanbul I-Turkey Uhlu Lokuphakathi Istanbul idolobha elihle ekulondolozeni isiko nomlando walo, liwahlanganisa nedolobha elijabulisayo elinokunikeza abahambi abavela kuwo wonke umhlaba umhlaba. Eyasungulwa esikhathini seNeolithic, i-Istanbul namuhla iyidolobha lesimanje elihlala liyiqiniso kumagugu alo omlando ngokusebenzisa ama-mosque, ama-basilicas kanye ne ...
Iziqhingi eziyi-10 ezinkulu e-Indonesia
Iziqhingi zase-Indonesia ezinkulu eziyi-10 Uhlu lokuqukethwe I-Indonesia yiqembu leziqhingi elikhulu kunawo wonke emhlabeni, lineziqhingi ezingekho ngaphansi kuka-17 ezigcwele amahlathi ezisogwini lwase-Asia. Iziqhingi ezinhlanu zithathwa njengezikhulu ngenxa yobukhulu bazo obukhulu, kanti ezinye zihlukaniswe phakathi kweziqhingi ezincane ezingama-000 zase-Indonesia. Nginethulela ukunaka iziqhingi eziyi-30 ezinkulu e-Indonesia. ishumi…
Amabhishi amahle kakhulu ayi-10 esiqhingini saseLombok e-Indonesia
Amabhishi Ayishumi Ahamba Phambili Esiqhingini SaseLombok e-Indonesia Uhlu Lokuphakathi Abahambi beza eLombok ngezizathu eziningi. Bangase bafune ukuhlola imvelo noma bafunde kabanzi ngalo mphakathi oyisiqhingi onamaSulumane kakhulu. Abanye bafuna ukubona amanye amabhishi amahle kakhulu eLombok, ukushiswa yilanga, futhi mhlawumbe nokushayelwa ngesikebhe, ukudilika nokuntweza emanzini. Nakhu ...
Iziqhingi eziyi-10 ezihamba phambili e-Indonesia
Uhlu Lokuqukethwe EziQhingini Ezihamba Phambili Eziyi-10 zase-Indonesia i-Indonesia itholakala phakathi kwe-Indian kanye ne-Pacific Ocean futhi ngenhla nje kwe-equator. Leli zwe eliyingqayizivele lineziqhingi ezingaphezu kwezi-17 ezahlukahlukene. Iziqhingi ezidume kakhulu njengeJava, iSumatra neBorneo ngezinye zezikhulu emhlabeni, kepha ezincane nazo kufanele ukuvakashelwa. Noma kungenjalo…
Великобритания Ukraine Czech Republic
Ирландия Croatia Греция
Spain I-Montenegro Poland
Yonke imibhalo mayelana namazwe aseYurophu
Izindawo ezi-10 eziphezulu zokuvakashela eNgilandi
Izindawo Eziphezulu Eziyi-10 Zokuvakashela eNgilandi Uhlu Lokuphakathi I-England iyindawo enhle ongayihambela, noma ngabe abahambi balibangise ohambweni lwabo lokuqala noma lwe-XNUMX phesheya. Lokhu kuyingxenye ngoba asikho isithiyo solimi kubantu abakhuluma isiNgisi, yize izilimi ezivela emhlabeni wonke zingazwakala lapha. AbakwaNewbies bangahle bafune nje ...
Izindawo ezi-10 ezinhle kakhulu eLondon I-Great Britain
Izindawo ezili-10 ezihamba phambili zaseLondon I-United Kingdom Ithebula lokuqukethwe IBustling, idlamkile futhi inamasiko amaningi ILondon ingelinye lamadolobha amakhulu emhlabeni anabantu abayizigidi eziyi-8. Idolobha elihamba phambili emhlabeni lamasiko, imfashini, ezezimali, ezombusazwe kanye nezohwebo, futhi ihlala ingenye yamadolobha avakashelwa kakhulu emhlabeni izivakashi zomhlaba wonke. Idolobha linezimpawu eziningi ezidumile, futhi ...
Izindawo ezi-6 ezinhle kakhulu eFinland
Izifunda eziyisithupha ezihle kakhulu eFinland Uhlu lokuqukethwe Elinye lamazwe asenyakatho kakhulu emhlabeni, iFinland iyindawo enhle ongayihlola, njengoba iyikhaya lamahlathi amakhulu nenani elingaziwa lamachibi akhiwa ngemuva kwenkathi yokugcina yeqhwa, lapho izinguzunga zeqhwa ziqopha izingqimba eziningi zesifunda. Ogwini lwayo olude, olunqamula njenge ...
Izindawo eziyi-10 ezithakazelisayo eRomania
Izindawo ezi-10 ezithokozisayo eRomania Uhlu lokuqukethwe IRomania, etholakala ePeninsula yaseBalkan, izwe lokuqhathanisa. Izwe elaliyiMpumalanga Bloc iminyaka eminingi kwakungelabantu baseHungary, Ottoman kanye namaRoma, abanika leli lizwe igama lalo. Izwe ligcwele amadolobha amadala amahle, izindawo zokungcebeleka ezisezintabeni ezinikeza amathuba amahle okushushuluza, nokukhula ...
Izindawo ezi-9 ezinhle kakhulu eRomania
Izifunda ezi-9 ezinhle kakhulu eRomania Uhlu lokuqukethwe IRomania, etholakala eningizimu-mpumalanga yeYurophu, iyizwe elikhulu kunawo wonke kulesi sifunda futhi yakhiwe kakhulu yizintaba, amagquma namathafa avulekile, lapho kugeleza khona uMfula iDanube, oholela ogwini oluhle loLwandle Olumnyama. AmaCarpathians amangalisayo aphakama ngaphezu kwendawo yezwe, kepha empeleni ...
Amadolobha ama-5 amahle eCinque Terre. I-Italy
Amadolobha ama-5 amahle eCinque Terre. I-Italy Uhlu lokuqukethwe ICinque Terre ngokungangabazeki ingenye yezindawo ezinhle kakhulu e-Italy. Ukuvakashela okungenani noma yimaphi amadolobha akhe kuzokuqinisekisa lokhu. ICinque Terre yadalelwa ukuhlobisa amakhadikhadi. Amadolobha awo amahlanu asenyakatho-ntshonalanga ye-Italy, emagqumeni asemaweni nasemadwaleni aphakeme abheke uLwandle iMedithera ...
Kenya ENamibia ETanzania
Yonke imibhalo mayelana namazwe ase-Afrika
Izindawo ezi-10 eziphezulu eMorocco
Izindawo eziyi-10 ezihamba phambili eMorocco Okuqukethwe u-Humphrey Bogart no-Ingrid Bergman kungenzeka banikeze umhlaba iCasablanca, idolobha elikhulu kunawo wonke ezweni, kepha iMorocco inokuningi okumele ikubone ngale kwaleli dolobha elikhazimulayo. Leli koloni lakudala laseFrance linikeza abahambi ithuba lokungena empilweni yamasiko asendulo ama-Arabhu namaBerber, bathamele ilanga emabhishi ...
Izindawo ezi-10 ezinhle kakhulu zaseMorocco nezimpawu zomlando - i-TripAdvisor
Uhla Lokuqukethwe Okuphezulu Kwe-10 Okuhehayo eMorocco Ugu lwaseMorocco nezwe elihehayo, elinamabhishi amade, amachweba okudoba anezindawo eziqinile, ama-oase aluhlaza nezintaba eziphakeme ze-Atlas, zingaba nentshisekelo kubahambi. Faka kulokhu amadolobha ombuso aseFez, eMeknes naseMarrakesh ngezibonelo zawo ezinhle kakhulu zokwakhiwa kwamaSulumane okuqala, nawe ...
10 amabhishi amahle eMorocco
Uhla Lokuqukethwe Okuphezulu Kwamabhishi Ase-10 AseMorocco Ugu lwaseMorocco luhamba ngo-Atlantic Ocean ngasentshonalanga nolwandle iMedithera ngasenyakatho, okusho ukuthi kunenqwaba yamabhishi okufanele uvakashelwe futhi ujabulele. Kunezindawo eziningi ezimnandi zabashushisi abathanda kakhulu nabathanda izindawo zamanzi, futhi azikho ...
Amathempeli aseGibhithe asendulo amangalisa kakhulu
Amathempeli aseGibhithe asendulo amangalisa kakhulu Okuqukethwe kwaseGibhithe Umlando wezakhiwo zasendulo zaseGibhithe ubuyela emuva ezinkulungwaneni zeminyaka edlule. Amathempeli okuqala aseGibhithe akhiwa maphakathi nenkulungwane yesi-10 BC futhi ayeyizakhiwo zomhlanga ezinesizotha kuphela. Ithempeli lokugcina, elalisetshenziswa ngabaseGibhithe lasendulo ngenhloso yalo, lasebenza njengethempeli kuze kube sekhulwini lesithupha leminyaka lethu ...
Izindawo ezi-10 ezihamba phambili zokuvakashela eNamibia
Izindawo Eziphezulu Eziyi-10 Zokuvakashela eNamibia Uhlu Lokuphakathi INingizimu-ntshonalanga Afrika iyikhaya laseNamibia, ikoloni langaphambili laseJalimane elathola inkululeko ngo-1990 kuphela. INamibia yaziwa ngomkhakha wayo wedayimane namasiko amathe, kanye nenani elimangazayo lokuheha kwemvelo. Uma umbono wakho weholide lokuphupha ufaka ama-adventures amaningi asebenzayo ...
Ukuhamba eNingizimu Melika
10 amabhishi amahle kakhulu eHonduras
Iziqhingi ezi-5 eziphezulu eHonduras
Izindawo ezi-5 ezinhle kakhulu eBrazil
Izindawo ezi-5 ezinhle kakhulu eBrazil Uhlu lokuqukethwe IBrazil iyisidlakela saseNingizimu Melika. Yizwe elikhulu kunazo zonke ezwenikazi futhi izwe lesihlanu ngobukhulu emhlabeni. Kuyikhaya lamadolobha anabantu abaningi futhi adume kakhulu emhlabeni; njengeRio de Janeiro, futhi wonke umuntu angacabanga ngaleli dolobha elikhulu elidumile elisogwini. 5 amahle kakhulu ...
Izindawo ezi-10 ezinhle kakhulu zeBolivia nezimpawu zomhlaba - i-TripAdvisor
Uhlu Lokuqukethwe Okuphezulu Kwe-10 Kwezokungcebeleka eBolivia IBolivia ingelinye lamazwe aphakeme kakhulu futhi aqhelile emhlabeni, iningi lawo elihlala lingathintwanga yisikhathi. IBolivia iyikhaya labantu bendabuko abaningi kunanoma iliphi elinye izwe eMelika. Kubahambi, iBolivia inikela ngokuxubana okuhlukahlukene kokuhlangenwe nakho kwamasiko wezizwe ngezizwe, izindawo ezinhle zemvelo nokuzidela okukhulu. Ngicabanga ...
Izindawo ezi-10 ezihamba phambili zokuvakashela e-Ecuador
Izindawo Eziphezulu Eziyi-10 Zokuvakashela e-Ecuador Eqanjwe nge-Equator ehamba ezweni lonke, i-Ecuador izwe elinikeza okuthile kuwo wonke umuntu. Iqala ngamakhilomitha ayizinkulungwane nengxenye yogu lolwandle ngamabhishi amahle, futhi ukusuka lapho kuya e-Andes kanye namahlathi emvula asemgodini womfula ogcwala kakhulu emhlabeni - ...
Ukuhamba eMelika Ephakathi neseNyakatho
Izindawo ezivakashelwa kakhulu ezivakashelwa eBelize
Izivakashi eziyi-10 ezihamba phambili eBelize Uhlu Lokuphakathi Cabanga ngezwe elinamabhishi asezindaweni ezishisayo, izixhobo zamakhorali, ukwakheka kwemihume, izilwane zasendle ezingajwayelekile kanye ne-Caribbean vibe ebuyile. Futhi ngasogwini lwaleli zwe kunesithiyo sesibili esikhulu kunazo zonke emhlabeni, futhi amanxiwa amathempeli asendulo asakazeke kulo lonke ihlathi lalo. Uma ucabanga ukuthi izwe elinjalo ...
Izindawo eziyi-10 ezithakazelisa kakhulu eCosta Rica
Iphakathi kweNicaragua nePanama, iCosta Rica inezimbali nezilwane eziningi kakhulu emhlabeni, ngaphezu kwezindawo zezintaba, izigodi, amahlathi, izintaba-mlilo, amabhishi, amachibi nemifula. Ukuhamba eceleni kwayo akushiyi muntu ongenandaba.Nasi isilinganiso sami sezingu-10 ezithakazelisa kakhulu ...
Amachibi ayi-12 amahle kakhulu eNew Zealand
Amachibi ayi-12 amahle kakhulu eNew Zealand Uhlu lokuqukethwe Kutholakala oLwandlekazi iPacific eningizimu-mpumalanga ye-Australia, iNew Zealand yakhiwa iziqhingi ezimbili ezinkulu futhi idume ngezintaba zayo eziphakeme namathafa emvelo amahle. Iningi lomhlaba kulezi ziqhingi liyindawo yamapaki kazwelonke, ikakhulukazi eSouth Island, lapho cishe lonke ugu olusentshonalanga ...
30.10.2020 / o gavriliuk ir kvitka / I-Australia ne-Oceania, I-New Zealand / Amazwana emachibini ayi-12 amahle kakhulu eNew Zealand akukho
Uhambo lwezinsuku eziyi-7 oluhamba phambili ukusuka eQueenstown E-New Zealand
Uhambo lwezinsuku ezi-7 oluhamba phambili ukusuka eQueenstown I-New Zealand Uhlu Lokuphakathi I-Queenstown yidolobha elincane lezokuvakasha eliseNew Zealand elisogwini lweLake Wakatipu kanye nemibono emihle yezintaba ezisibekelwe yiqhwa. Esikhathini esingengakanani esidlule, besaziwa ikakhulukazi njenge-ski resort, kepha manje isimo sesishintshe kakhulu ...
29.10.2020 / o gavriliuk ir kvitka / I-Australia ne-Oceania, I-New Zealand / Amazwana Ukuya ku-7 Best Day Trips kusuka eQueenstown. E-New Zealand akukho
Izindawo ezi-16 ezinhle kakhulu eNew Zealand
16 Izifunda Ezinhle Kunazo Zonke eNew Zealand Uhlu Lokuphakathi Elinye lamazwe amahle kakhulu emhlabeni, iNew Zealand e-Oceania igcwele iziheho zemvelo ezinhle kakhulu. Izintaba-mlilo eziningi neziqongo zezintaba zikhuphuka ngaphezu kogu olude futhi oluhehayo olunezigodi ezivundile, amachibi acwazimulayo nemifula egcwele leli zwe elibusisiwe.
29.10.2020 / o gavriliuk ir kvitka / I-Australia ne-Oceania, I-New Zealand / Amazwana ezifundeni eziyi-16 ezinhle kakhulu eNew Zealand akukho
Izinto eziyi-10 ezimnandi okufanele uzenze eNapier. E-New Zealand
Izinto eziyi-10 ezimnandi okufanele uzenze eNapier. I-New Zealand Uhlu Lokuphakathi Idolobhana elincane laseNapier esiQhingini saseNyakatho, elisogwini olusempumalanga yeNew Zealand elibheke olwandle iPacific Ocean, liyindawo enhle kakhulu futhi ethokozisayo yokuzijabulisa okumnandi. INapier, eyaziwa nangokuthi "i-Art Deco Capital of the World", igcwele izakhiwo ezinhle ezibonisa isitayela esihlukile sokwakha; Okuningi ...
27.10.2020 / o gavriliuk ir kvitka / I-Australia ne-Oceania, I-New Zealand / Amazwana ukuqopha imisebenzi e-10 ethokozisayo eNapier. E-New Zealand akukho
Izinto ezi-9 ezinhle kakhulu ongazenza kuNelson. E-New Zealand
Izinto ezi-9 ezinhle kakhulu ongazenza kuNelson. Uhlu Lokuphakathi lwaseNew Zealand Lisondele osebeni oluhle lweGulf of Tasman, idolobha laseNelson lilele engxenyeni enhle ngokumangalisayo yaseNew Zealand, izungezwe amapaki kazwelonke amathathu amangalisayo. Indawo yokuhlala endala kunazo zonke ezweni, leli dolobha lasungulwa ngo-1841 ngu-Lord Admiral Nelson, aqanjwa ngaye. Idolobha, ngesiteketiso ngothando ...
27.10.2020 / o gavriliuk ir kvitka / I-Australia ne-Oceania, I-New Zealand / Amazwana ezintweni ezi-9 eziphezulu okumele zenziwe kuNelson. E-New Zealand akukho
Uhambo lwezinsuku eziyi-9 oluhamba phambili olusuka e-Auckland. E-New Zealand
Uhambo lwezinsuku eziyi-9 oluhamba phambili olusuka e-Auckland Okuqukethwe eNew Zealand I-Auckland, idolobha elikhulu kunawo wonke eNew Zealand, inokuningi engakunikeza. Iyikhaya labantu abaningi kakhulu basePolynesia emhlabeni. Yakhelwe enkundleni esebenzayo yentaba-mlilo ye-basalt - okuwukuphela kwedolobha elinjalo emhlabeni. Ineminyuziyamu enhle kakhulu, imarina enkulu kunazo zonke eningizimu yezwe futhi ...
27.10.2020 / o gavriliuk ir kvitka / I-Australia ne-Oceania, I-New Zealand / Amazwana Ukuhamba ngezinsuku ezingu-9 ezinhle kakhulu usuka e-Auckland. E-New Zealand akukho
Amapaki kazwelonke amahle kakhulu eChina
Amapaki kazwelonke amahle kakhulu aseChina Ithebula lokuqukethwe Amapaki kazwelonke mhlawumbe akuyona into yokuqala efika engqondweni uma ucabanga ngeChina. Kodwa-ke, leli zwe linamapaki kazwelonke angaphezu kwengu-12. Eminyakeni yamuva nje, uhulumeni waseChina wenze imizamo yangempela yokwandisa uhlelo lwamapaki kazwelonke. Ikakhulu ukukhokhela ukungcola, ...
Izindawo eziyi-10 ezimangalisa kakhulu empumalanga yeChina
Izindawo eziyi-10 Ezimangalisa Kakhulu eMpumalanga China Uhlu Lokuphakathi I-Eastern China ngumhlaba wayo. Unomlando ocebile, amanye amadolobha angaphezu kweminyaka engama-6000 ubudala. Sekungamakhulu eminyaka, impumalanga yeChina idale isimo esiduduzayo futhi siqabule umphefumulo. I-Eastern China ijabulisa zonke izinzwa zakho: kusuka emadolobheni amahle wamanzi, awelwe yimisele egcwele ukuhambisa kancane ...
Izindawo eziyi-10 ezimangalisa kakhulu enyakatho yeChina
Izindawo ezi-10 ezihamba phambili ezimangalisa kakhulu eNyakatho China Uhlu Lokuphakathi I-People's Republic of China yizwe elikhulu futhi elihlukahlukene. Ngenxa yobukhulu bayo, akunakwenzeka ukukubona konke ohambweni olulodwa, kepha kukhona izinto ezithakazelisayo ezweni lonke. INyakatho yeChina iyisinqumo esingcono kakhulu kubahambi bokuqala.INyakatho yeChina yilapho uzothola khona ...
Izindawo eziyi-10 ezimangalisa kakhulu eningizimu yeChina
Izindawo Eziningi Ezimangalisa ENingizimu neChina Uhlu Lokuphakathi I-China ne-United States zihlanganisa cishe umhlaba ofanayo, kodwa iChina iyikhaya labantu abacishe babe isigidi. Ukuhamba kuleli zwe elikhulu kungaba yinselele. Kepha kuzoba lula kakhulu uma uhlukanisa leli lizwe libe izingxenye ezincane ngokuya nge ...
Amaqiniso angaziwa ngeGreat Wall yaseChina
Amaqiniso amancane awaziwayo ngeGreat Wall yaseChina IGreat Wall yaseChina. Enye Yezimangaliso Ezintsha Zomhlaba IGreat Wall yaseChina, efakwe kuhlu lweNew Seven Wonders of the World, ingesinye sezikhumbuzo esidume kakhulu emhlabeni, kepha kungahle kube khona izinto ezimbalwa ongazi ngazo okwamanje. ngo-…
Sihamba sinqamula iRussia, i-Ukraine neBelarus
Izindawo ezihehayo ezi-10 eRussia
Izindawo Eziphezulu Eziyi-10 Zokuthakaselwa eRussia Uhlu Lokuphakathi Izwe elikhulu kunawo wonke emhlabeni, iRussia inikeza okuhlangenwe nakho okuhlukahlukene kwabahambi. Ukusuka ekukhuphukeni intaba emithambekeni yezintaba ezicwebezelayo kuya ekuhambeni ngasogwini lwechibi elidala lomhlaba. Izindawo zomlando nemicimbi yamasiko iyatholakala emadolobheni amakhulu ezwe. Akunandaba ukuthi uhlola insimu ...
Izindawo ezimangalisa kakhulu empumalanga yeRussia
Izindawo ezimangalisa kakhulu empumalanga yeRussia Uhlu lokuqukethwe Iningi lezivakashi eziya eRussia zichitha isikhathi sazo engxenyeni esentshonalanga yezwe. Amadolobha afana neMoscow neSt. Petersburg anokuningi ongakusiza, kepha ungaphuthelwa yikho konke okutholakala empumalanga yeRussia. Le ndawo uma unentshisekelo kwimvelo enokhahlo, kusukela eRussia Far East ...
Okufanele ukwenze e-Omsk. ERussia
Okufanele ukwenze e-Omsk. Okuqukethwe eRussia ERussia, engxenyeni eseningizimu yeWestern Siberia, lapho kuhlangana khona uMfula i-Irtysh nomfula ongakwesokudla, obizwa nge-Om, idolobha lesigidi lisendaweni ethokomele - i-Omsk. Ngokuhlala entshonalanga yeSiberia, inketho yokuthenga ifulethi e-Omsk mhlawumbe iyona ethakazelisa kakhulu. Ngoba idolobha lilungele impela ...
Phumula eCrimea Okuqukethwe Hlangana - eCrimea! Yini into yokuqala efika emqondweni lapho ucabanga ukuthi uzolichithela kuphi iholide lakho? Yiqiniso - iCrimea! Iyini iCrimea? Okokuqala, iCrimea ngumlando ocebile futhi ojabulisayo. AmaGenesis, amaGreki, amaTatar, amaRussia, ama-Ukraine. Lokhu kusho ukuthi kunemikhondo yomlando - izinqaba, izinqaba, izindlu zezindela, ...
Idolobhana lase-Dzhubga. Isifunda saseKrasnodar. ERussia
Idolobhana lase-Dzhubga. Isifunda saseKrasnodar. I-Russia Okuqukethwe Ukubuka okufushane Ngifuna ukukutshela ngomuzi odumile wase-Dzhubga, yize umncane kakhulu, utholakala kahle kakhulu, emlonyeni othokomele womfula wegama elifanayo, ogelezela oLwandle Olumnyama. Kwenzeka ukuthi labo abahamba baya oLwandle Olumnyama ngomgwaqo omkhulu u-M-4 badlule kulo muzi, njengasesifubeni. ...
Ukuhambahamba uzungeze iBali
Iziqhingi ezingama-7 ezingaphandle kweNusa Tengara. I-Indonesia
Iziqhingi ezingama-7 ezingaphandle kweNusa Tenggara. I-Indonesia Uhlu Lokuphakathi Amakhulu eziqhingi ezisuka empumalanga yeBali, eyaziwa ngokuthi yiNusa Tenggara, yindawo ehambela phambili ethandwa kakhulu empumalanga ye-Indonesia. Ezinye iziqhingi ziziqhayisa ngamabhishi amahle afanayo aheha izivakashi kumakhelwane wazo waseBalinese ...
25.09.2020 / o gavriliuk ir kvitka / E-Asia, Индонезия, Ukuhambahamba uzungeze iBali / Amazwana ukuqopha iziqhingi eziyi-7 ezingaphandle kweNusa Tengar. I-Indonesia akukho
Iziqhingi eziyi-10 ezinhle kakhulu eduze kwaseBali
Iziqhingi Ezinhle Kunazo Zonke IBali Uhlu Lokuphakathi IBali, eyaziwa nangokuthi i-Island of the Gods, iyindawo ethandwa kakhulu ukuvakasha e-Indonesia. Ukuhlanganisa umlando omangalisayo namasiko angokomoya angajwayelekile, iBali inokuthile kuwo wonke umuntu ovakashelayo. Futhi okubaluleke kakhulu, lesi siqhingi sihle impela, sinakho konke kusuka ...
25.09.2020 / o gavriliuk ir kvitka / E-Asia, Индонезия, Ukuhambahamba uzungeze iBali / Amazwana eziqhingini eziyi-10 ezinhle kakhulu eduze kwaseBali akukho
Amahhotela ayi-10 ahamba phambili eBali
Amahhotela ayishumi aphezulu eBali Uhlu Lokuphakathi I-Bali ngokungangabazeki iyindawo enhle kunazo zonke yokuhlala e-Indonesia.Amahhotela amaningi abhajethi esiqhingini angatholakala eKuta, okuyilapho izivakashi eziningi ziya khona. okugxile eNusa Dua, Seminyak nase-Ubud. Amahhotela e-Ubud nezindawo zokungcebeleka zilungele ...
24.09.2020 / o gavriliuk ir kvitka / E-Asia, Индонезия, Ukuhambahamba uzungeze iBali / Amazwana emahhotela ayi-10 ahamba phambili eBali akukho
Uhambo lwethu oluya eBali Day 1 Ukufika eDenpasar cishe ngehora lesibili ntambama. Ihhotela lethu iBali Hyatt lisithumele itekisi nge-DRIVER enobungani 🙂 saya eSanur cishe isigamu sehora .. siye eBali Hyatt yethu. Ngokushesha sayithanda iSanur ... nalezi zindlu ezinhle nesimo sezulu esihle eBali ...
11.09.2020 / Angel / E-Asia, Ukuhambahamba uzungeze iBali, Ukubuyekezwa okuthembekile / Amazwana we-3 ohambweni lwethu oluya eBali
Amathemba wamandla elanga emhlabeni
Amathemba wamandla elanga emhlabeni Ilanga linikeza iplanethi yethu amandla angaphezu kweziyizinkulungwane eziyi-15 ngaphezu konyaka ngamunye edliwa isintu. Izinzuzo ezinkulu zamandla elanga ukutholakala okujwayelekile nokungapheli, kanye nokuphepha kwezitshalo zamandla elanga zemvelo. Kuze kube manje, cishe izindlela eziyishumi zokuguqula imisebe yelanga sezakhiwe futhi zasetshenziswa (ezikalini ezahlukahlukene) ...
15.01.2021 / Angel / Amaqiniso anentshisekelo, ukwaziswa okuwusizo / Amazwana kumathemba wamandla elanga emhlabeni akukho
Amapaki wamanzi asendlini angama-6 amakhulu kunawo wonke emhlabeni
Amapaki wamanzi asendlini amakhulu ayisithupha emhlabeni Uhlu Lokuphakathi Lapho inkathi efudumele iphela endaweni yangakini, kungaba umqondo omuhle ukuqala ukufuna amapaki wamanzi angahlala evulekile unyaka wonke futhi angathintwa umoya nemvula. Amapaki amaningi asendlini athanda ukumemezela ukuthi angakanani nokuthi asendlini kangakanani - amapaki amanzi ...
21.12.2020 / o gavriliuk ir kvitka / Amapaki wamanzi, Amaqiniso anentshisekelo / Amazwana emapaki amanzi asendlini amakhulu ayisithupha emhlabeni akukho
Ama-zoo ayi-8 amakhulu kunawo wonke emhlabeni
Ama-zoo ayi-8 ngobukhulu emhlabeni Uhlu lokuqukethwe Ngakho-ke iyiphi i-zoo enkulu kunazo zonke emhlabeni? Impendulo yalo mbuzo incike ezimisweni lapho kusetshenziswe igama elithi “enkulu”. Sikala inani lezinhlobo zabathunjwa noma indawo ephelele yezu. Uma sibheka isici sesibili kuphela, khona-ke iRed McCombs Wildlife Zoo ...
19.12.2020 / o gavriliuk ir kvitka / Ama-zoo, Amaqiniso anentshisekelo, ukwaziswa okuwusizo / Amazwana ukuqopha ama-zoo angu-8 amakhulu kunawo wonke emhlabeni akukho
Imizila ye-helicopter eyi-10 ethakazelisa kakhulu emhlabeni
Imizila eyi-10 ephezulu kakhulu ethinta izindiza ezinophephela emhlane emhlabeni Ngaphezu kwalokho, ukuvakasha kwezindiza ezinophephela emhlane kuvame ukuphela kwendlela izivakashi ezingakujabulela ngayo ukuhlola izindawo ezikude kakhulu zesifunda. Isibonelo, amaphesenti angama-70 amaHawaii ...
19.12.2020 / o gavriliuk ir kvitka / Amaqiniso anentshisekelo, ukwaziswa okuwusizo / Amazwana emizileni eyi-10 enophephela emhlane ethakazelisa kakhulu emhlabeni akukho
Izindonga eziyi-10 ezidume kakhulu emhlabeni
Izindonga eziyi-10 ezidume kakhulu emhlabeni Uhlu Lokuphakathi Izindonga zakhiwe kusukela ezikhathini zasendulo ukucacisa imingcele ukugcina izitha noma ezinye izinhloso zingaphandle. Muva nje, izindonga nazo sezakhiwe njengezikhumbuzo nezakhiwo zobuciko. Kepha noma ngabe basebenzela yiphi injongo, izindonga zilawula ukwakheka kwezwe nomaphi lapho zimi khona ...
15.12.2020 / o gavriliuk ir kvitka / Amaqiniso anentshisekelo / Amazwana ezindongeni eziyi-10 ezidume kakhulu emhlabeni akukho
Amabhuloho angama-25 asabekayo emhlabeni
Ama-20 Amabhuloho Awesabekayo Ohlwini Lokuqukethwe Ngesikhathi amabhuloho enzelwe ukusinikeza indlela ephephile yokuwela isithiyo sisuka kwenye indawo siya kwenye, amanye awo kufanele agwenywe kakhulu ukuphepha kwakho. Ukweqa ezinye, lokhu kukude nokuhamba ngezinyawo ...
05.12.2020 / Mazalya / Amaqiniso anentshisekelo / Amazwana emabhulohweni angama-25 asabekayo emhlabeni akukho
Wonke umuntu unamanga
Basikhohlisa kanjani ngingathanda ukwabelana ngolwazi lwami lokusebenzisa izibuyekezo ze-aggregator yokubhukha amahhotela nensizakalo ye-Google Reviews. Nakhu ukuthi kwakunjani. Kulobu busika (2020), ngindiza ngendiza ngaya eSri Lanka futhi ngahlala lapho ehhotela ebibhukelwe ngaphambilini. Ihhotela lakhethwe ngokucophelela ngokususelwa kuzibuyekezo, izithombe, kanye nokulinganiselwa kwezivakashi okwakungathi zangempela. Lolu lwazi lutholwe ku ...
12.09.2020 / IRoma / E-Asia, Без рубрики, Amahhotela, Ukubuyekezwa okuthembekile / Amazwana we-6 wonke umuntu unamanga
Awekho amarekhodi atholakele.
Amasonto ama-8 amahle kakhulu eRoma I-Italy
Izindawo ezi-10 ezinhle kakhulu ze-Oslo ENorway
10 amasonto amahle kakhulu enkuni eNorway
Izindawo ezi-10 ezinhle kakhulu zaseNorway nezimpawu zomhlaba - i-TripAdvisor
Amapaki kazwelonke amahle kakhulu eNorway
Ukuthola ubuhle beziQhingi zaseLofoten eNorway
5 ama-fjords amahle kakhulu eNorway
Izindawo ezi-6 ezinhle kakhulu eNorway
Izitebhisi eziyi-12 + 1 ezisabekayo emhlabeni
Izimangaliso Ezi-7 ZaseGrisi Yasendulo
Izindawo eziyi-10 ezithandwa kakhulu ePoland
Izindawo eziningi zeholide ezingaphansi komhlaba eGrisi
Kirillovka. Phumula oLwandle lwase-Azov. I-Ukraine
Iziqhingi eziyi-10 ezinkulu eGrisi
Iziqhingi ezinhle ezisenyakatho-mpumalanga ye-Aegean Sea. IGrisi
Iziqhingi ezi-4 ezinhle kakhulu eSporades. IGrisi
Izindawo ezi-13 ezinhle kakhulu eGrisi
Iziqhingi eziyi-11 ezinhle kakhulu zaseDodecanese IGrisi
10 amabhishi amahle kakhulu eGrisi
Iziqhingi ezinhle kakhulu zase-Ionia IGrisi
Izinto Eziphezulu Eziyishumi Okufanele Zenziwe eSantorini Greece
Isigodlo esimangalisayo saseKnossos esiqhingini saseCrete eGrisi
Izinto ezi-10 ezithokozisayo zaseKrethe. IGrisi
Izindawo ezili-10 ezihamba phambili zeThesaloniki IGrisi
Izinto ezi-10 ezithakazelisa kakhulu ePeloponnese IGrisi
Iziqhingi ezi-8 ezijabulisayo eduze kwase-Athene IGrisi
Okuhehayo okuphezulu okungu-10 eMykonos IGrisi
Izindawo eziheha kakhulu e-Corfu IGrisi
Izindawo ezili-10 ezinhle kakhulu zaseRhodes IGrisi
Izindela ezingama-6 ezihlaba umxhwele eMeteora IGrisi
Amamephu ezwe lezivakashi
Amamephu asebenzayo wamazwe omhlaba
Sikwethulela amabalazwe wezwe, ngezindawo ezikhangayo ezihehayo nezinye izinto ezithokozisayo nezibalulekile. Amamephu asebenzisana ngokuphelele, aqukethe izithombe nezincazelo zezinto ezikhangayo, ukwesekwa usesho oluhlakaniphile, ukuhlunga imiphumela yosesho nokuzulazula okugcwele... Izivakashi ezibhaliswe kusayithi zikwazi ukufinyelela ekusebenzeni okuthuthukile kwamakhadi - ukungeza omaka bakho, ukuhamba ngezinyawo, imizila nokunye okuningi. Futhi onawo amamephu esathelayithi, amabalazwe aphakeme nokusiza, futhi amamephu wesimo sezulu asebenzayo ngokusekelwa kokubikezela.
Konke mayelana neThailand
Imephu evamile yase Thailand Thailand
Izindiza zezindiza zaseThailand
Konke mayelana neSri Lanka
Izifunda kanye nezindawo zokungcebeleka zaseSri Lanka
Imephu yesimo sezulu yaseSri Lanka
I-Indonesia (Bali, Java)
Bali. Imephu exhumana yokuheha kanye namabhishi
Java. Imephu exhumana yokuheha kanye namabhishi
Konke mayelana neVietnam
Imephu ejwayelekile yokuheha kanye namabhishi
Imephu yesimo sezulu saseVietnam
Imephu ejwayelekile yezindawo ezikhangayo namabhishi aseSingapore
Imephu yesimo sezulu eSingapore
Konke mayelana neSingapore
Imephu ejwayelekile yezindawo ezikhangayo namabhishi aseNdiya
Isimo sezulu ku India + izibikezelo
Konke mayelana neNdiya
Amathiphu awusizo kwabahambi. Impilo hacks
Ubuhle nobubi. Umoya, ulwandle, ujantshi, okuzenzakalelayo ...
Ungonga kanjani ekuhambeni emoyeni
Imithetho Yezimpahla Zomoya
Ukukhetha ihhotela. Amathiphu
Yini ongayikhohlwa ohambweni
Siqoqa umthwalo kahle
Ikithi yosizo lokuqala
Ukuzibophezela kwezindiza. Ukubhukuda ngokweqile. I-Airhelp
Sithola imali yokuhamba
Izinhlelo Zokwenza Imali Zezithombe
Izindatshana ezintsha ku-portal
14.11.2020 / Amazwana ku-River cruises akukho
Ibhishi eliyimfihlo. Ibhishi iBias Tugel eBali
26.10.2020 / Amazwana olwandle oluyimfihlo. Ibhishi iBias Tugel eBali akukho
Ibhishi iSanur eBali. I-Indonesia
25.10.2020 / Amazwana olwandle iSanur eBali. I-Indonesia akukho
Ibhishi lasePandawa eBukit. Bali
25.10.2020 / Amazwana ebhishi lasePandawa eBukit. Bali akukho
Ibhishi lasePadang Padang eBali. I-Indonesia
25.10.2020 / Amazwana olwandle lwasePadang Padang eBali. I-Indonesia akukho
Ibhishi Lamakhowe. Isiqhingi saseLenbongan. Bali
22.10.2020 / Amazwana ebhishi lamakhowe. Isiqhingi saseLenbongan. Bali akukho
ILembeng Beach eBali. I-Indonesia
22.10.2020 / Amazwana eLembeng Beach eBali. I-Indonesia akukho
Isiqhingi saseNusa Cheningan, eBali. I-Indonesia
Isiqhingi saseMenjangan eBali. I-Indonesia
Isiqhingi saseNusa Lembongan. Bali. I-Indonesia
Isiqhingi saseNusa Penida. Bali. I-Indonesia
Umcimbi - izinkambo
Ukuvakasha kwe-gastronomic newayini
Ezokuvakasha zasolwandle ezijulile
Sesha. Umoya namahhotela
Ukubhalisa ku-portal Journey-assistPlay
Akusona yini isikhathi sokuba sihambe?! ;)
Engeza Journey-Assist esikrinini sakho sasekhaya!
Ukuvuka ekuseni ngolunye usuku ngemuva kokulala engalalanga, uGregor Zamza uthole ukuthi wayesephenduke isilokazana esibi embhedeni wakhe.